UKUPHELA KWEWOLF HALL KUYENZA ILUFANELE UHAMBO - ANNE BOLEYN
Uphengululo lweMini-uthotho: Ukuphela kweWolf Hall kuyenza ilulungele uhambo
Iinkonzo ezintsha ze-PBS IWolf Hall , malunga nokuphakama komcebisi ka-King Henry uThomas Cromwell, lelinye lamaxesha ambalwa ndibukele i-miniseries kwi-Masterpiece Theatre kwaye ndacinga ukuba ndinqwenela ukuba olu ludidi lwamaxesha onyaka. Ulwakhiwo, uthotho oluneenxalenye ezintandathu luziva luhamba kancinci kwaye luhamba ngokungxama, kuba kugubungela imicimbi yeenoveli zembali IWolf Hall kwaye Yiza namaQumrhu nguHilary Mantel zizinto ezininzi. Iincwadi zigxile kubomi bemihla ngemihla bezopolitiko zasebukhosini ngemihla kaKumkani uHenry VII, endithanda ukusebenza kakhulu kumabonwakude (jonga: Tudors ), kunye IWolf Hall iphumelela kakhulu xa ijolise kakhulu ekusebenzisaneni kukaCromwell nomntu omnye; Ngokukodwa, isiqendu esinye esigxile kuThomas More no-Anne Boleyn.
fallout 4 ibhinqa okanye indoda
UCromwell, odlalwa nguMark Rylance, uqala ibali njengendoda eye yazakhela isikhundla samandla ngexesha apho bekungenakwenzeka, ngokusebenzisa ubuchule bayo, ubalo, kunye nendlela ebambekayo kwezopolitiko, ishishini kunye nomgaqo-nkqubo. . UCromwell uneentombi ezimbini kunye nomfazi abonisa uthando kuye, kwaye unyana umkhathaleleyo nangona engekhoyo. Uziswa enkundleni kuqala ukuba abe ngumcebisi we-chancellor u-Thomas More, kodwa ekugqibeleni abe ngu-Henry VIII (edlalwa ngu-Damien Lewis) ongumcebisi oyintloko, xa efuna ukuphuma kwiCawe yama Katolika kwaye azibize ngegama njengentloko yeCawe. waseNgilani. UCromwell wenza konke oku ukuze uHenry ahlukane noKumkanikazi uCatherine aze atshate no-Anne Boleyn (uClaire Foy). UBoleyn ubanga ukuba wazisa uCromwell kwisikhundla sakhe, othe ekugqibeleni wabangela ukuba awe kubabalo ukuze avumele uHenry ukuba aqhawule umtshato kwaye atshate umfazi wesithathu.
Ibali alikho elitsha, kodwa ukubalisa ibali ngokwembono yeCromwell, ehlala ibonakaliswa njengomntu okhohlakeleyo kumabali anje Indoda yamaXesha onke Inika ubunzima bokulinganiswa kunye nokungaqondakali ngaphandle kokumenza nantoni na engaphezulu kweqhawe lokulwa. NjengoWalter White kwindlu yobukhosi yaseTudor, ukunyuka nokuwa kukaCromwell yinto yokujonga, kwaye uRylance ulungile ekubonakaliseni inyani yeemvakalelo ngasemva kwangaphandle kwakhe okunzima. Kodwa inkonzo zezona zinto zibalaseleyo URylance wenza ngokuchasene noClaire Foy, ngakumbi kwisiqendu sokugqibela, xa aba babini benyuka ngokuchasene omnye nomnye ngaphandle kokuhamba nje. Ngaphandle kwayo yonke into esiyaziyo ukuba uCromwell uzimisele ukuyenza (zininzi izinto ezikhankanyiweyo zokusebenzisa kwakhe ukungcungcuthekisa ukukhusela isivumo), nguBoleyn kuphela kwakhe obonakala ekwazi ukubambelela kude kube sekupheleni. Onke amadoda angenise ukuwa, kodwa ubambelela kude kube sekufeni kwakhe- kwaye uRylance kunye noFoy ngasemva nangaphaya yinto yokujonga.
Isizathu sokuba isiqephu sokugqibela silunge kakhulu kukuba iimpembelelo zokuziphatha ngokubaluleka koxanduva lokubulawa zizisiwe ekhaya. Ingaba unetyala okanye umsulwa wokungathembeki, ukungathembeki, okanye ukutshata, u-Anne Boleyn wabulawa ngenxa yokuba uKumkani wayefuna ukuba kwenziwe, ukuze akwazi ukutshata omnye umfazi kwaye abe nendlalifa eyindoda. Sichitha iziqendu ezihlanu sisiva ukuba uBoleyn uzama ukuba yindlalifa eyindoda, kwaye uziva uneentloni zokulahleka amaxesha amaninzi nangona uneKumkanikazi uElizabeth. Ngalo lonke elixesha, ugcina isimo esikhohlakeleyo nesimdaka ngendlela ayisebenzisayo ukubonisa isikhundla sakhe njengomfazi otshata emandleni, kodwa engenayo eyeyakhe, ehlekisa kwaye ehlekisa ngenkundla yakhe kunye nabo baphantsi kwakhe njengendlovukazi ekwishumi elivisayo. Uya kumthiya u-Anne, kodwa kwangaxeshanye, uya kuba lusizi ngokusweleka kwakhe ekugqibeleni. Nangona uCromwell, oza kumthiya ngenxa yenkohlakalo yakhe kunye nokuzama kwakhe ukuthatha amandla akhe, uyavuma ukuba ukuzisa ukuwa kukaBoleyn ukuzonwabisa kwenkosi yakhe kuyaphazamisa.
Kuyamangalisa ngandlela ithile ukuba uLewis akananto ingako ayenzayo kwiinkonzo zecandelo ezintandathu, nangona ehlawuliswa okwesibini; ulungile, kodwa akakhangeleki, njengoKumkani omncinci, ngokuqinisekileyo ehambisa umfanekiso weklasikhi ka-Henry VIII (ngaphambi kokuba abe yindoda enkulu kakhulu). Lonke ixabiso lemveliso kule miniseries liyamangalisa; iimpahla zinhle kwaye ziyafundisa, kubandakanya ukusetyenziswa kwamalaphu kunye noboya ukucebisa ubume kunye nendawo. Iiseti zithembekile, kwaye ukuzonwabisa kweenqaba ezisetyenziswe njengeentolongo kuyaphazamisa ngokwenene. Ukubhalwa, nangona kuhlala kumangalisa okwangoku, kuhlala kubandakanya iingxoxo ezinomdla malunga nokusebenza kwangaphakathi kwenkundla yasebukhosini xa ubukhosi babunamandla onke.
apho unokuthenga khona iincwadi ezihlekisayo
Inkulumbuso yeWolf Hall kwi-PBS ngokuhlwanje nge-10 ngokuhlwa, kwaye igqitywa ngeCawa, nge-10 kaMeyi.
Udliwanondlebe noMatty Beckerman, uMlawuli we-IFC ezinzulwini zobusuku yokuThinjwa kwabaNtu
I-Spider-Man: Kude neKhaya kuqaqambise isiphene esisisiseko kuTony Stark kunye noMmangaliso weCinematic Universe nge-EDITH
UHarry iHermit Crab Uhlala kwiShell yeLEGO
Kutheni i-Heck ifumene iShaneli yokuFumana kwakhona iFake Megalodon yoXwebhu kwakhona?
Uphononongo: UChris Pine weba umboniso ngokungalinganiyo ndibubusuku
lin manuel miranda pop umfanekiso
Indoda evela kumalume sequel 2019
U-donald trump cinco de mayo ucaphule
yindawo yotyelelo ephelayo